UJony Ive ubuyile kulawulo loyilo luka-Apple | IPhone iindaba
UJony Ive ubuyile kulawulo loyilo luka-Apple
UJony Ive ubuyile kwisikhundla asishiya kwiminyaka emibini edlulileyo. Nge-Apple Park sele ikwisigaba sayo sokugqibela sokwakha, inkampani yabetha i-Ive kwindawo ephezulu kunokuba ibibanjelwe kodwa Ukuhamba uyilo lwemveliso yeApple kwaye uthathe indawo kwisakhiwo esitsha sikaApple. U-Apple ushiye amabini angaphantsi kwe-Ive anoxanduva loyilo lwezixhobo zekhompyutha kunye nesoftware, kwaye wabhengeza esidlangalaleni.
Nangona kunjalo, xa abaninzi babecinga ukuba esi yayisisandulela somhlala-phantsi kaJony Ive, owayezakushiya inkampani kungekudala, isimanga kukuba U-Apple umbuyisele kwisikhundla sakhe sokuqala, iingxelo zeBloomberg. Ngale ndlela, kwakhona, zonke izigqibo ngokubhekisele kuyilo ngaphakathi kwenkampani zidlula ezandleni zakhe kwakhona, njengoko kwenzekile ngaphezulu kweshumi leminyaka.
UJony Ive weza e-Apple ngo-1996, xa u-Apple wayeyinkampani emiselwe ukuba inyamalale, de kwafika uSteve Jobs kungekudala. Ukususela kumzuzu wokuqala Ive ibalulekile kuyo yonke imveliso yenkampani, kwaye Omnye wabokuqala ukubonisa uyilo lwabo yayiyi-iMac ka-1998, umsindisi omkhulu waloo nkampani uSteve Jobs wayesandula ukuphinda abuyele kwindawo ephambili kumzi mveliso wekhompyuter.
Ngexesha lale minyaka mibini akunakutshiwo ukuba i-Ive ihleli ngaphandle koyilo luka-Apple, kodwa bekungasemva ukuzinikezela ngakumbi kuxanduva lwakhe kwikhampasi entsha yenkampani. Ngapha koko, i-iPhone X, imveliso entsha yenkampani, ikwanoxanduva lwakho.. Kudliwanondlebe oluninzi okoko kwasungulwa, ukwenze kwacaca ukuba i-smartphone entsha ye-Apple linyathelo lokuqala kuphela lenkqubela phambili yenkampani. Nje ukuba i-Apple Campus igqityiwe, iApple ingasothusa ngeemveliso ezintsha kuluhlu lweMac kunye ne-iPad.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » UJony Ive ubuyile kulawulo loyilo luka-Apple
I-Apple inokuthenga i-Shazam kunye nenkqubo yayo yokwazisa umculo
Yocingo ihlaziywa ngenani elikhulu leendaba